Ballon d’Or ဆုပေးပွဲမတက်တဲ့ ရော်နယ်ဒိုကို ကောင်းကောင်းကြီး လှောင်ပြောင်သွားခဲ့တဲ့ ဗန်ဒိုက်ချ် …. – Myan Ball
Ballon d’Or ဆုပေးပွဲမတက်တဲ့ ရော်နယ်ဒိုကို ကောင်းကောင်းကြီး လှောင်ပြောင်သွားခဲ့တဲ့ ဗန်ဒိုက်ချ် ….
ရော်နယ်ဒိုက ဘာဖြစ်လို့လာရမှာလဲ။ သူဆုရမှာမို့လို့လား။” ဆိုပြီး လှောင်ပြောင်သွားခဲ့တာပါ …..
လီဗာပူး အသင်းရဲ့ နောက်ခံလူ ဗန်ဒိုက်ချ်က မနေ့ညက ပဲရစ်မြို့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ (၂၀၁၉) ခုနှစ်အတွက် Ballon d’Or ဆုပေးပွဲကို မတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ရော်နယ်ဒိုကို လှောင်ပြောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားမှာ ဘာစီလိုနာ အသင်းခေါင်းဆောင် မက်ဆီက လီဗာပူး နောက်ခံလူ ဗန်ဒိုက်ချ်၊ ဂျူဗင်တပ်စ် တိုက်စစ်မှူး ရော်နယ်ဒိုတို့ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး သူ့ရဲ့ ကစားသမားဘဝ အတွက် (၆) ကြိမ်မြောက် Ballon d’Or ဆုကို ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့တာပါ။
ဗန်ဒိုက်ချ်ကလည်း (၂၀၀၆) ခုနှစ်က ကင်နာဗာရို ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆုကို ရပြီးနောက်ပိုင်း ဒီဆုကို ဆွတ်ခူးနိုင်တဲ့ ပထမဆုံး နောက်ခံလူ တစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ ရေပန်းစားခဲ့ပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာတော့ မက်ဆီကပဲ Ballon d’Or ဆုရှင် အဖြစ် အောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ (၂၃) ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ FIFA ရဲ့ The Best ဆုပေးပွဲကို မတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ရော်နယ်ဒိုဟာ မနေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ Ballon d’Or ဆုပေးပွဲကို မတက်ရောက်ခဲ့ပါဘူး။
ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ မီဒီယာတွေက ဗန်ဒိုက်ချ်ကို မေးမြန်းခဲ့ရာမှာ “ရော်နယ်ဒိုက ဘာဖြစ်လို့လာရမှာလဲ။ သူဆုရမှာမို့လို့လား။” ဆိုပြီး လှောင်ပြောင်သွားခဲ့တာပါ။ ရော်နယ်ဒိုအနေနဲ့ Ballon d’Or ဆုအတွက် မက်ဆီ၊ ဗန်ဒိုက်ချ်တို့ရဲ့ နောက်မှာသာ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီး ရော်နယ်ဒိုအတွက် ဒီလိုမျိုး ထိပ်ဆုံး (၂) ယောက်စာရင်းထဲ မပါဝင်ခဲ့တာက (၂၀၁၁) ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ပထမဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာတော့ ရော်နယ်ဒိုက အီတလီနိုင်ငံ၊ မီလန်မြို့မှာ ကျင်းပနေတဲ့ Gran Gala Awards ကိုတော့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး စီးရီးအေပြိုင်ပွဲရဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီ တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံးကစားသမားဆု၊ တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှူးဆုကို ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သေးတာပါ။
မနေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ Ballon d’Or ဆုပေးပွဲ မတိုင်ခင်အထိ ရော်နယ်ဒိုနဲ့ မက်ဆီတို့က ဒီဆုကို (၅) ကြိမ်စီ ရယူထားပြီး လက်ရှိအချိန်မှာတော့ မက်ဆီက ရော်နယ်ဒိုထက် (၁) ကြိမ်အသာရသွားခဲ့ပါပြီ။
နည်းပြအဖွဲ့ဝင် (၉) ယောက်အထိ တောင်းဆိုခဲ့လို့ အာဆင်နယ် နည်းပြမဖြစ်လာတဲ့သူနဲ့ အတူ အခြားသော နံနက်ခင်းသတင်းတိုများ …..
အသင်းဟောင်းကို ပြန်ဖို့ သဘောတူညီမှုရသွားတဲ့ အီဘရာဟီမိုဗစ်နဲ့အတူ အခြားသော နေ့လယ်ခင်းသတင်းတိုများ ….